Hoggaanka Galmudug oo u soo guuray Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Hoggaanka Galmudug oo u soo guuray Muqdisho
Sida ay Keymdedia Online u sheegeen, saraakiil ka tirsan ciidanka 21-aad, Kooxda Al-Shabaab, ayaa maalmihii danbe siyaadisay culeyska ay saarayaan degaannada Koofureed ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan degaanno koofur-qorraxsimaad uga beegan magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, (Qoorqoor), Madaxweyne ku xigeynkiisa Cali Daahir Ciid iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Maxamed Axmed Gacal, inta badan Wasiirrada iyo Xildhibaannada GM, ayaa magaalada Muqdisho ugu sugan danahooda gaarka ah, xilli xaalado ammaan laga soo sheegayo Galgaduud.
U-jeedka ay shaqsiyaadka hoggaanka u ah Galmudug u joogaan Caasimadda ayaa ah sababo la xariira howlaha doorashooyinka Madaxweynaha dalka oo Axadda soo socota la qorsheeyay in la qabto, hayeeshee, ma jiraan wax shaqooyin ah oo ay ku qoran yihiin, waxayna canshuurtii laga aruuriyay shacabka Gaalkacyo, Cadaado, Dhuusamareeb iyo Guriceel, ku jiifaan huteellada Muqdisho.
Sidoo kale, dadka degmada Guriceel ayaa qaba cabsi xooggan oo ku aaddan in Kooxda Ahlu-sunna maalmahaan duullan ku soo qadaan magaalada, waxaana durba la soo sheegayaa in shacab badan ka qaxay xaafadaha waqooyi ee degmada, maadaama dhaqdhaqaaq ciidan oo xooggan laga dareemayo degaanka Bohol.
Sida ay ku doodayso madasha Badbaadada Galmudug, tallaabada ugu horreeya ee bulshada degaankaas looga fadhiyo doorashada Madaxweynaha kadib, waa badbaadada maamulka iyo in lala xisaabtamo hoggaanka haatan oo ah haraadi uu ka tagay Farmaajo.